C-O-P-Y ကိုယ်ပိုင် | Lionslayer : The Legend
Blog Screenshot (Nevermind the corrupted texts. I'maUnicode user.)
ဒီနေ့အသိတစ်ယောက် FB မှာ လင့်တစ်ခုရှဲထားလို့ သွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာပါပဲ။ ဒီမူပိုင်ခွင့်အကြောင်း ပြောလည်းပြောခဲ့ကြပါပြီ။ ပြောလည်း ပြောနေကြတုန်းပါပဲ။ အွန်လိုင်းမှာ Image Search နဲ့ ရှာလို့ရလာတဲ့ ပုံတွေကို ကိုယ့် ဝဘ်ဆိုက်မှာ၊ ဘလော့မှာ သုံးကြပါတယ်။ ဒီထိအဆင်ပြေပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ချို့က Photoshop အားကိုးနဲ့ ဟိုပြင်ဒီပေါင်းလုပ်ပြီး ပုံလေးတွေကိုသပြီး ပြန်တင်ကြပါတယ်။ ဒီထိလည်း ရပါသေးတယ်။ တချို့ကျတော့ ဒီလို အားကြိုးမာန်တက် ဖိုတိုရှော့ထားတာကို သူများတွေ အလွယ်ယူမသုံးစေချင်ကြပြန်ပါဘူး။ ဒီတော့ Copyrighted By ဆိုပြီး ကိုယ့်နာမည်လေး နောက်က ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကိုသီဟက ရှက်တတ်ဖို့ လုပ်ရဦးမယ် ဆိုပြီး မြန်မာကျူတိုရီရယ်မှာ ရေးပါတယ်။ အဓိကက ဆော့ဝဲအကြောင်းပါ။ တစ်ယောက်က ဘာလို့ သူများပုံတွေနဲ့ ဘလော့မှာ တင်ထားတာလဲလို့ ထောက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပေသားပဲလို့တွေးပြီး ကျွန်တော့ ဘလော့က အရင် အွန်လိုင်းကပုံတွေ ယူသုံးထားတာတွေ အကုန် လိုက်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Creativity ရှိတယ်လို့ ကြံဖန်တွေးချင်ရင် အစကအဆုံး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ ကိုယ့်ပုံကိုယ် သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
အွန်လိုင်းက ပုံတိုင်း Copyright နဲ့ ကန့်သတ်ပြီး သုံးမရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ပုံတွေမှာ Creative Commons License တွေ ပေးထားပါတယ်။ License Version အလိုက် အဲဒီပုံတွေကို ပြန်သုံးခွင့် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုတယ် မပြုဘူး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးခွင့်ရှိတယ် မရှိဘူး စသည်ဖြင့် ကွဲပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ CC3 က အလွတ်လပ်ဆုံးပါပဲ။ ပြန်သုံးခွင့် ပြင်ဆင်ခွင့် ပြန်ဝေမျခွင့်အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါ ပြန်သုံးခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် မူရင်းပုံရဲ့ Copyright က သူ့မူလပိုင်ရှင်ဆီမှာ ကျန်ပါသေးတယ်။ Fair Use – အများပြည်သူအကျိုးအတွက် ခြွင်းချက်နဲ့ သုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ ပုံတွေ ရှိပါတယ်။ Copyrighted လုပ်ထားရင်တော့ မူရင်းပိုင်ရှင်က ခွင့်မပြုရင် ဘယ်မှာမှ သုံးမရပါ။ ခွင့်ပြုချက်နဲ့သုံးပြီးတဲ့ ပုံတွေရဲ့ မူပိုင်ခွင့်မှာတောင် “All Rights Reserved” ယူထားလို့မရပါ။ မူရင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ ပုံ၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ မူပိုင်ခွင့်က မူရင်းပိုင်ရှင်ဆီမှာသာ ရှိတာကြောင့် “Some Rights Reserved” သာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Filter Google image search for reuse
ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပုံ ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ရင် Google က Search Result တွေကို Filter လုပ်လို့ရတဲ့နည်း ရှိပါတယ်။ Google Image Search ထဲမှာ Advanced Search ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြန်သုံးရုံပဲ သုံးချင်တာဆိုရင် Usage Rights ထဲမှာ Labeled for Reuse ကို ရွေးပေးပါ။ ပုံကို ပြင်ပြီးမှ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Labeled for Reuse with Modification ကို ရွေးပေးပါ။
Copy = My Own?
Otto de Voogd က ပြောတာက သူ့ပုံကို Aung က ယူသုံးထားတယ် Copyrighted By ဆိုပြီးတော့လည်း သူ့ဆိုက်လိပ်စာ ထိုးထားပါတယ်။ အဲဒါကို သူ့ဘလော့မှာ Copyright Image ကို ယူသုံးထားတာဖြစ်လို့ Copyrighted (All Rights Reserved) မတပ်သင့်ကြောင်း သွားကွန်းမန့်ပေးတော့ Aung က မဟုတ်ဘူး ငြင်းပါတယ်။ သူ့ကွန်းမန့်တွေကိုလည်း ဖျက်ပစ်ပါတယ်။ ကြောက်စရာ့ ဆင်ဆာပါပဲ။ နောက်ပိုင်း ကွန့်မန့်တွေကို Letters Page ကို ရွှေ့ထားတာ တွေ့ပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်ကတော့ ဒီပုံမှာ သုံးထားတဲ့ မူရင်းပုံတွေဟာ ပထမတစ်ကြိမ်မှာ သူကိုယ်တိုင် နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း ရိုက်ထားဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယတစ်ကြိမ်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းဆီက ယူသုံးထားတာဖြစ်​ကြောင်း နဲ့ တတိယတစ်ကြိမ်မှာ ပုံရတဲ့လင့်ကို ပြပြန်ပါတယ်။ ဗလောင်းဗလဲလို့ ပြောရမလားပဲ။ မူရင်းပုံ ပိုင်ရှင်က အထောက်အထား ခိုင်လုံပါတယ်။ ၂၀၀၅ က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလည်းဖြစ်တယ်။ ဆိုက်တော်တော်များများကလည်း သူ့ပုံကို ယူသုံးထားကြပါတယ်။ တခြား သူ့ပုံကို ယူသုံးထားတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း 7is7.com ဆိုတဲ့ ရေစာပါပါတယ်။ သူသုံးတယ်ဆိုတဲ့ Crop လုပ်ထားတဲ့ ယှဉ်ပြထားတဲ့ ပုံတွေမှာလည်း မူရင်းပုံလောက် အနားဝန်းကျင်တွေ အစုံအလင်မပါပါ။ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ ပုံများဖြစ်နေမလားဆိုပြီး Photoshop မှာ Layer သွားထပ်ကြည့်တော့လည်း ကွက်တိပဲ ကျနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပိုဆိုးလာတာက မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာရေးသူရဲ့ ကွန်းမန့်မှာ ဒီဘဲကြီးဟာ သူ့ပုံကို ယူသုံးထားပြီး သူခိုးက လူလူဟစ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောထားတာပါပဲ။
စာရေးသူဟာ မြန်မာတွေရဲ့ အရိုးစွဲနေတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို မကြိုက်ကြောင်း သူ့ပို့စ် တော်တော်များများမှာ ပြောထားတာ တွေ့ပါတယ်။ မှားတာတောင် ဝန်မခံဘဲ ကျားကျားမီးယပ် ဖင်ပိတ်ငြင်းတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုး သူ့ဆီမှာ ကျန်သေးတာကတော့ ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။ စာရေးသူလုပ်သင့်တာက မခက်လှပါ။ ယူသုံးမိကြောင်း ဝန်ခံပြီး တခြားတစ်ပုံ ပြောင်းတင်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဒီပို့စ်တွေ့တော့မှ လုပ်မယ်လို့ ကြံထားပြီး မရွေ့သေးတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို သတိရမိပါတယ်။ မြန်မာ ဓာတ်ပုံတွေကို Wikimedia Commons ကို ဝိုင်းတင်ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်မယ့် Activity Project လုပ်ဖို့ပါ။ မြန်မာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘယ်အကြောင်းအရာမဆို CC3 ပေးထားတဲ့ ပုံတွေ အွန်လိုင်းမှာ အင်မတန် နည်းနေတာ သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာရတယ်လို့ တွေးမိတယ်။ ဟိုတလောကတော့ ထူးတေဇာက သူ့ပုံတချို့ ပေးမယ်လို့ ပြောထားတာ သတိရတယ်။ ဒီ လှုပ်ရှားမှုကို ပြည်တွင်းမှာ ဒိုင်ခံလုပ်နိုင်တဲ့ (ဓာတ်ပုံတွေကို လက်ခံ၊ လိုက်ရိုက်၊ Caption ရေး) စေတနာ့ဝန်ထမ်း Organizer တစ်ယောက် အလိုရှိပါတယ်။
#Updated on 21st July#
ဒီနေ့ မူရင်းပုံပိုင်ရှင်ဆီက တုံ့ပြန်ချက် ထွက်လာပါပြီ။ (All Right Reserved) ဤ ပုံနှင့် ပတ်သက်သမျ အခွင့်အရေးအားလုံးကို မူပိုင်ထားသည် ဆိုတဲ့ စာသားကို ဖြုတ်ပြီး သူမူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ (Attribution) လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည် ဝေမျခွင့် ပေးဖို့ သုံးရက်+နောက်တိုးနှစ်ရက် ပေါင်း ငါးရက် ပေးထားပေမဲ့ အကြောင်းမပြန်တာကြောင့် အောက်ဖော်ပြပါပုံကို CC License နဲ့ ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလင့်ကို ပြန်ညွှန်းပြီး မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ မျှဝေသုံးစွဲပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
Myanmar with Yangon Bus under proper license
Tags: aung.info, copyright, Creative commons, image, Myanmar, Myanmar Bus
24 Responses to “C-O-P-Y ကိုယ်ပိုင်”
Copyright | Saturngod says:
[…] မောင်မောင်ဆန်း facebook မှာ share ထားတာနဲ့ C-O-P-Y ကိုယ်ပိုင် ဆိုတဲ့ post ကို ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ […]
Credit is Respect | Lionslayer : The Legend says:
[…] have writtenapiece when someone usedamodified photo and refused to give credits. It’s happening again in […]
😛 Yeah, coz’ I’m the very active blogger in Myanmar blogsphere and have loads of jealousy to his blog and guess what? I even get rewarded for informing this very HONEST affair. LMAO
@xxxxslayer, your comment seems like “ရဲသွားမတိုင်ရင် လူမိမှာ မဟုတ်ဘူး”. 🙂
Well.. It didn’t happen, if Jealous blogger “mydaydream” or Chan Myae Khine didn’t inform and even invited google plus to Otto de Voogd.
#Someone with fake name, fake email and with my site address commented here. I publish it without any editing except for xxxx on username and this note.#
ဒီ အောင် အင်ဖို ဆိုတဲ့ blog ပိုင်ရှင် ရဲ့ သရုပ်မှန်တွေကို ထောက်ပြဝေဖန်နေကြတာနဲ့ပါက်သက်လို့ သူ့ရဲ့ အမာခံ အချို့က ဘယ်နိုင်ငံက ဘလော့ဂါတွေက ဘယ်နိုင်ငံက ဘလော့ဂါကို ဝိုင်းနှိပ်ကြတယ်၊ မနာလိုလို့ပြောကြတယ် ဆိုပြီး မဆိုင်တဲ့အပေါက်ကနေပြန်လိုက်ဖြေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဘာကိုမနာလိုဖြစ်ရမှာလည်း၊ဘာအ တွက်မနာလိုဖြစ်ရမှာလည်း လို့ပဲမေးချင်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်၊ ကျွန်တော်ဘလော့ဂါမဟုတ်ပါ) ဒီပုံအတိုင်းဆို လူကြီးလူကောင်းဟန်ဆောင်နေတဲ့ မူးယစ်ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းတဲ့ရဲကို ဒီလူဆိုးချမ်းသာတာမနာလိုလို့ဖမ်းတာလို့ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။ နောက်ပြီး ဒီလိုဝိုင်းပြီး ပြစ်တင်ကြတာကို မြန်မာ့အကျင့်ဆိုးတဲ့။ အဲ့ဒါခက်တာပါပဲ။ ဒီလူရဲ့ flow တွေတော်တော်မိနေပုံရပါတယ်။ အမေရိကန်စစ်သားတွေ အီရတ်အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းသားများကို မတော်မတရားလုပ်တာပေါ်သွားတော့ လူတွေဝိုင်းဆဲကြတယ်၊ တရုတ်ပြည်မှာ နို့မှုန့်ထဲ ပရိုတိန်းအတုထည့်တော့ လူတွေဝိုင်းအော်ကြတယ်၊ ဒီလိုဝိုင်းပြောကြ ထောက်ကြတာ လူ့သဘာဝပါ။ မြန်မာ့မူပိုင်မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ပြီးထပ်ပြောတာက မြန်မာ့စရိုက်ဆိုးတွေကို ထောက်ပြတာကို အဆိုးကိုလက်မခံနိုင်လို့၊ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းလက်မခံနိုင်လို့ ဝိုင်းပြောကြတာလို့လည်းပါသေးတယ်။ အားလုံမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းလက်မခံပဲ ဘယ်သူ ငါတကောကောပြီးပေခံနေသလဲဆိုတာ။ ကျနော့သဘောကိုပြောရရင်တော့ မှားတာကို positively ထောက်ပြတဲ့လူကို အလွန်ပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်နိုင်မှာလေ။ ခက်တာက ဒီလူက မြန်မာ့ Nature နဲ့ Human Nature ကို မခွဲနိုင်တာပါပဲ။ ဒီအကြောင်းစာဖတ်သူတစ်ဦးကလည်း သူ့ကိုထောက်ပြထားပြီးသားပါ။ ဆိုပါစို့ မနာလိုဝန်တိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမြန်မာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာဖြစ်သွားပြီဆိုပါတော့။ အဲ့ဒီမှာ ဒီလူက ဒါကိုချပြပြီး တွေ့လားမြန်မာတွေ မကောင်းပုံဆိုပြီးလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ မနာလိုဝန်တိုဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို jealousy ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရပင်ရှိနေပြီး လူတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကို ဒီလူမသိကျိုးကျွန်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟာက ဥပမာပေးတာပါ။ အခုဒီလူ သူများပုံယူသုံးပြီးကိုယ့်ဟာလုပ်၊ လိမ်ညာတာကို မကြိုက်တဲ့စာဖတ်သူတစ်ဦးက မူရင်းပိုင်ရှင်ဆီသွားအကြောင်းကြားတာကိုလည်း မြန်မာ့အကျင့်ပဲဆိုပြီး ပြောနေတာသာကြည့်ပါ။ ဒီလူ အဲ့ဒီလိုရေးပြလိုက်တော့ မိမိကိုယ်ကို ပညာတတ်ထင်နေပြီး တကယ်တမ်း ပညာရည်ပြည့်ဖို့လိုနေသူများက ဟာဟုတ်လိုက်တာ၊ ကြည့်စမ်းဒီလိုမီးမောင်းထိုးပြရဲတာ သတ္တိကောင်းလိုက်တာ စသည်ဖြင့်အလိုလိုသူ့အောက်ကို လျှိုဝင်သွားကြပါတော့တယ်။ ဖတ်တာများလာရင် ကြာလာရင် ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် အကြောင်းမဲ့ အသားလွတ်မုန််းတီးတဲ့ဝေဒနာ အမြင်မကြည်တော့တဲ့ ဝေဒနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (ယခုဒီလူခံစားနေရတဲ့ အနုစားစိတ်ဝေဒနာလိုမျိုးပေါ့)။ အဲ့ဒီကနေရင့်လာရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်လည်း? ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြားနိုင်ငံသားသာပြောင်းလို့ရမယ်၊ လူမျိုး၊ gene ကိုတော့ ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိလာတဲ့နောက်ပိုင်း(Self hatred/ Self loathing)လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းတီးစိတ် တွေ သိပ်ဆိုးဝါးတဲ့ အဆင့်မှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Self hatred ရဲ့ အကျိုးဆက်တွေဘာတွေလာနိုင်သလဲ ကိုယ့်ဖာကိုယ်သာစဉ်းစားကြည့်ပါတော့။ ဒါကြောင့် ဒီလောက် အချိန်ကုန်ခံ၊ အလုပ်ပျက်ခံပြီး ရှင်းပြနေရတာ၊ ဒီလူ့ အကြောင်းကို အထုပ်ဖြေပြနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ရှင်းပြပြီးတာမို့ လက်ခံတာ လက်မခံတာကတော့ ကိုယ့်သဘောအတိုင်းပါပဲ။ ထောက်ပြပြုပြင်ခံရတာနဲ့ အပြစ်ရှာ လက်ညိုးထိုး ခံရတာ ကွဲပြားပါစေ။ ဒီလောက်ဆို ဒီအဖြစ်လေးဟာ ဒီလူ့အတွက် deterrant အနည်းနဲ့ အများတော့ဖြစ်မယ်ထင်တာပါပဲ။ ကဲ မြန်မာ့မူပိုင်မဟုတ်တဲ့ မြန်မာများမှာ လည်းတွေ့ ရတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုး တစ်ခုကိုပြောပြပါ့မယ်။ ဘာလည်းဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ကိုးစားမိပြီဆို ဒီလူဘာလုပ်လုပ် ဘာပြောပြော အမြဲ အဟုတ်ပဲ သူပြောတာပဲ အမှန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ နားတစ်ဖက်ပေါက် အကျင့်ပါ။ Please wake up.
စာကြွင်း၊ Self loathing အကြောင်း google မှာ ရှာပြီး ဗဟုသုတ ယူနိုင်ကြောင်း Share ပါရစေ။
I’ve read this blog and originating blog both. Links as well. So far it seems like sg bloggers are somewhat annoyed at that guy for sometime already.
Why ? Because he had some personal beefs with sg in the past and wrote about these,validity and appropriateness of his arguments,are of course,relative.
But,for those of you who wax-lyrical about life-style and technology over there might be clearly seem to think that he’d crossed the line once so many. And now it is about time to ဝိုင်းဖဲ့ .
@John, I barely read Myanmar blogs except for some Unicode blogs. I’ve criticized many indiscriminately. If you have ever involved in some extreme discussions about Copyright and CC on many of Wikimedia projects, you will notice this isanotable case. I think this is not about time to ဝိုင်းဖဲ့ but about time to be aware of long-neglected Copyrights in our everyday issues. Thanks.
[…] ကို မောင်မောင်ဆန်း facebook မှာ share ထားတာနဲ့ C-O-P-Y ကိုယ်ပိုင် ဆိုတဲ့ post ကို ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ […]
hi bro, fyi, i’ve putalink to your post.
I see your pingback first 😛
Hi bro, I just share my opinion too. here http://www.htootayzar.com/myblog/2011/07/copyright-or-copy-is-right/
Copyright or Copy is Right? « My Burmese Blog says:
[…] C-O-P-Y ကိုယ်ပိုင် […]
ကို Michael ရေ comment ရှည်များအတွက် sorry ပါ၊ ဒီ လူရဲ့ အကျင့်ကို အစကတည်း မကြိုက်လာတဲ့ အပြင် မှန်ရာ ထောက်ပြနေသူတွေကို ပါ ခြိမ်းသလိုလို ခြောက်သလိုလို လုပ်လာတဲ့ အတွက် ခံပြင်းလွန်းလို့ ရေးလိုက်တာပါ။ Thank you ပါ။ 🙂
ကို Michael ရေ နည်းနည်းထပ်ရှည်ပါရစေဦးဗျာ။
ကျွန်တော် online forum များ website များ blog များကို ဖတ်မိတဲ့ အထဲမှာ ဒီ Aung.info ဆိုတဲ့ blog ပိုင်ရှင်ကတော့ အဆိုးဝါးဆုံးပါပဲ။ ရှင်းပါ့မယ်။ အရက်သမား ဘိန်းသမား သူခိုးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကို လူအများက အရှိကို အရှိအတိုင်း သိနေကြပြီဆို ကျနော့အတွက်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို အကျင့်မကောင်းသူဟာ ဟန်ဆောင် သင်္ကန်းခြုံပြီး တရားပလ္လင်ပေါ်တက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟော ပြီး လူတွေကို လှည့်စားနေပြီဆိုရင်တော့ ကျနော့အတွက်ပြဿနာရှိပါတယ်။ ယနေ့ Internet ပေါ်ရှိ မြန်မာ blog များမှာ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ နည်းပညာ၊ စာပေ အစရှိသဖြင့် စုံလှပါတယ်။ တချို့ blog တွေရဲ့ အယူအဆတွေဟာ ကျွန်တော် သဘောတူတာရှိသလို သဘောကွဲတာလည်းရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာအမြင်ကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရှိလို့ ကျွန်တော် ဘာမှ စောဒကတက်စရာမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ blog ရေး ပြီး သိုးငယ်အရေခွံခြုံဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဝံပုလွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တားဆီးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီ အောင်ဆိုသူရဲ့ ဓါတ်ပုံယူသုံး ဗျောင်လိမ်တဲ့လုပ်ရပ်ဟာ သူ့အလိမ်အညာ လုပ်ရပ်တွေထဲက တစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တခြား site တစ်ခုကနေ ပုံကို မသိနိုးနားတတ်ယောင်ကားနဲ့ ယူသုံးလိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ပိုင်ရှင် claim လာရင် ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်းပြော ပြီး ယူမိကြောင်းဝန်ခံ ကျေနပ်တဲ့အထိလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကို Michael (Lionslayer) လည်းတွေ့တဲ့ အတိုင်းပဲ ပထမ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီက ရတဲ့ဟာ နဲ့သူ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ဟာ ဆိုပြီး သူ့ site မှာ စာဖတ်သူတစ်ဦးကို လျော့တွက်ပြီးလိမ်တယ်။ နောက် မူရင်းပိုင်ရှင်ကိုလိမ်တယ်။ ပထမလိမ်တာ ဟန်မကျတော့ တခြား site ကယူတာဆိုပြီး ရှေ့နောက်မညီ ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ယူသုံးတာ ဖြတ်ညှပ်တာ ဘာဖြစ်လည်း ဘာမှ infringe လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြောတဲ့ အပြင် ခြိမ်းခြောက်တဲ့ စာတောင်ရေးတင်လိုက်သေးတယ်။ သူရေးထားတဲ့ ဒီ post ကို ဖတ်ကြည့်ပါ. သူ့အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ကိုက်သလားသိရအောင်။ http://www.aung.info/?p=1246
တကယ်တော့ဒီလူဟာ ဟိုးအစကတည်းက ပိပိရိရိနဲ့လိမ်လာတာပါ။ သူ့အကြောင်း ကိုလူမသိအောင် လူအထင်ကြီးအောင်လည်း ဒီလို post တွေရေးတင်ပြီး မှင်ကောင်းအောင်နေခဲ့ပါသေးတယ်..
ကျွန်တော်ဟာ သူ့ site ကို စဖတ်စဉ်က ဘာမှ မသိသေးခင် အဲ့ဒီ posts တွေဖတ်ပြီး ဒီလူ့ကို အတော်ကို အဟုတ်ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာပါဘူး သူခြုံထားတဲ့ အရေခွံကို စတင်တွေ့ရှိ လာပြီး သူ့ အနေအထားကိုရိပ်မိလာတာပါပဲ။ အခုသူ့လုပ်ရပ်နဲ့ သူရေးထားတဲ့ post တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံး ဟာသရုပ်ရှင်ထက်ကို ရယ်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ရွံစရာလည်းကောင်းပါလိမ့်မယ်။ အရင်တုံးက ကျွန်တော်ရိပ်မိလာခဲ့ပေမဲ့ သက်သေပြစရာ ယခုလိုကောင်းကောင်းမရှိတဲ့ အပြင် အခြေအနေလည်း မကြံုခဲ့ပါဘူး။
ကျနော့အနေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ စရိုက်များကို ထောက်ပြတာ ပြုပြင်တာ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး၊ လက်ခံပါတယ်၊ ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို လုပ်တာ တကယ်စေတနာနဲ့လား တမင် ပုတ်ခတ်တာလားဆိုတဲ့ motive ကိုတော့ ရအောင်ရှာရပါမယ်။ ဒီလူဟာ စေတနာ ရှိလို့ ဆိုတာထက် မြန်မာလူမျိုးများကို သိသိသာသာ နှိမ့်ချပုတ်ခတ်ပြီး လူဖြူ အနောက်တိုင်းသားများကို‘မ’လိုစိတ်ကများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူသည်မြန်မာတွေလိုကျင့်သူမဟုတ် အနောက်တိုင်းသားတွေလိုသာကျင့်ကြံနေထိုင်သူ ဖြစ်ကြောင်း ကို ပါးပါးလေး ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း လူတွေက သူ့ကိုစာရေးပြီး ပြောကြလွန်းလို့ထင်တယ်. လူဖြူတွေမှာလည်း ဆိုးတာရှိပါတယ်ဆိုပြီး မပြောချင်ပြောချင် post ရှားရှားပါးပါးတစ်ပုဒ်ရေးတင်တာတွေ့ရပါတယ်။ သူ့ဖြေရှင်းချက်ကတော့ တခြားလူမျိုးတွေ မကောင်းကြောင်းပြောခြင်းသည် ရိုင်းရာကျလို့ မပြောဟု ဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုး အကြောင်းဆုံးမသလိုလိုနဲ့ နှိမ့်ချ မကောင်းပြောတာတော့ ဥပဒေ (အထူးသဖြင့် အော်စီ၊ အမေရိက၊ ဥရောပနိုင်ငံများမှ) ကလက်ခံတယ်လို့ အထင်ရောက်နေပုံရပါတယ်။
ပိုဆိုးတာက သူသည် အမျိုးသမီးများရဲ့ အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထားသူ၊ ပြည့်တန်ဆာကိုတောင်မှ ယူနိုင်သူ၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် သူတပါးနဲ့ဖောက်ပြန်နေရင်တောင် မှ ခွင့်လွှတ်မည့်သူ၊ အခြား မြန်မာယောကျ်ားများနဲ့မတူ အနောက်တိုင်းသားလိုသာတွေးခေါ်သူ၊ ချစ်သူရည်းစားအတွက် ဝေးရပ်ဌာနေမှပင် စိန်ထည်ပစ္စည်းဝယ်ပေးလိုသူ စသည် စသည်ဖြင့် သူ့ကိုယ်သူမသိမသာစောင်းပေးရေးထားပြီး မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ (အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားမှာ နေနေလင့်ကစား International exposure နည်း နေသေးသော မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ) ကို focus ထားလာတာ ကျွန်တော် ရိပ်စားမိလာပါတယ်။ Australia ကို partner visa နဲ့လာနိုင်ကြောင်းကို Visa အကြောင်း information ပေးသလိုလိုနဲ့ ပါးပါးလေးရေးပြခဲ့ပါတယ်။ (Detail ရေးစရာ Visa subclass တွေ အများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ)
ဒီကိစ္စနဲ့ပါက်သက်ပြီး ကျွန်တော်က Aussie မှာ ခင်ဗျား standard တွေနဲ့ ကိုက်တဲ့ အနောက်တိုင်းသူတွေအများကြီးပဲ ဘာလို့ မြန်မာ အမျိုးသမီးများကိုပဲရှာနေသလဲ လို့ comment ပေးပြီး မေးရာ အတော်အောင့်သက်သက်ဖြစ်သွားပုံရပြီး သူမိန်းမရှာနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ပြောလင့်ကစား လင်းယုန်ငှက်များနားစေသတည်း ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ post အပါအဝင် post အချို့မှာ သူမိန်းမရှာနေတယ်၊ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မသိ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို focus လုပ်နေတယ်၊ ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ရိပ်မိနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့နောက်မညီညွတ် အလိမ်တွေချည်းပါပဲ။ သူ့ဖာသာသူ partner ရှာတာကျွန်တော်ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ အလိမ်အညာတွေကို ကြည့်ရတာ သူသည်လူကောင်း မဟုတ်၊ လူကောင်းမဟုတ်သည့်အတွက် ယောက်ျားမိန်းမ မည်သူ့အပေါ်ကိုမျှကောင်းမည့်သူမဟုတ်၊ သူ့ အခွင့်အရေးသာသူကြည့်ပြီး ရလျှင်အကုန်ယူ မည့်လူစား၊ အမျိုးကောင်းသမီးများ ကိုးစားလို့ရမည့်လူမဟုတ်သည့်အတွက် သူ့အကြောင်းကိုလူတွေသိစေချင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အချစ်ဆိုတာပေးဆပ်မှု၊ အရာရာကို ပေးဆပ်ဖို့ အဆင်သင့် လို့ အသံကောင်းဟစ်ခဲ့လင့်ကစား ဒီ post http://www.aung.info/?p=2403 မှာ ဒီလောက်အထိမဟုတ်ကြောင်းကို ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ်ဖြေ ပြခဲ့ပြန်ပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်လိုပင် အသံကောင်းဟစ်နေလင့်ကစား online chat လုပ်နေစဉ်မှာပင် Australian values ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ tolerance ပင်မရှိပဲ chat လုပ်သူ (အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ဖို့များပါတယ်) ကို ဘောင်ကျော်တယ်ဆိုပြီး chat list ထဲ ကနေဖယ်ပစ်လိုက်ကြောင်း post တစ်ခုရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ဒီလိုလူစားများ လူလည်လူလိမ်မျိုးဟာ မသိနားမလည်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို prenuptial agreement နဲ့ ယူပြီး ဒီနေ့စိတ်ကုန်တာနဲ့ ဒီနေ့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းခိုင်းမဲ့ လူစားမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီလူ့ blogက တွေ့ရှိချက်တွေ လှိမ့်လုံးတွေကို ပြောရရင် စာအုပ်ပါးပါးတစ်အုပ်စာရပါလိမ့်မယ်။ comment သိပ်ရှည်မှာစိုးလို့ အကုန်မပြောတော့ပါဘူး။ အချို့သောသူ့စာ များဟာ စာသဘောအရ ကောင်းသော်လည်း သူ့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ စိတ်ဓါတ်ကြောင့် credit ပေးလို့ လုံးဝကို မရပါဘူး။ ယနေ့ online/internet လောကဟာ သိကြတဲ့ အတိုင်း အကျိုး ကျေးဇူးအလွန်များသလို ပက်ပက်စက်စက် အကျိုးယုတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Online ကနေ ကိုယ်ကိုးစားတဲ့ လူက dominate လုပ်ပြီး bully လုပ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားတဲ့အထိတောင် ကိစ္စတွေရှိနေလို့ ယနေ့ နိုင်ငံအများမှာ cyber crime နဲ့ ပါက်သက်တဲ့ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်မှန်တွေ မြန်မာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိသွားပါစေလို့ သာ ဆုတောင်းရမှာပါပဲ။
Thanks for your long and detailed comments Ko Tin. I just want to point out abuse of copyright in this post. 🙂
ကို Michael (Lionslayer) ရေ ရေးရပြန်ပါပြီ။ ကို Michael ပေးထားတဲ့ Link ကို လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ Australian Copyright Council ရဲ့ Information sheet ကို သွားတွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Sheet ရဲ့ Page7မှာ ယခုလိုရေးထားပါတယ်။
“Can people scan and alter my photographs without my permission? Who owns
copyright in the altered photograph?
Scanningaphotograph to makeadigitised version, or makingacopy of an existing digital file, reproduces the photograph and therefore generally requires the permission of the copyright owner (unless an exception to infringement applies).
If the other person createsanew artistic work using the scanned photograph, he or she will own copyright in the new work. However, if the new work incorporates an important, distinctive or recognisable part of the original photograph, the owner of copyright in the new work will need the original photographer’s permission to reproduce and communicate it to the public. The original photographer still owns copyright in the original photograph.
Alteration of photos may, in some cases, infringe your moral rights in the work (the rights to be attributed as creator ofawork, right not to be falsely attributed as the creator and the right of integrity against derogatory treatment of the work). “
ကျွန်တော် Law ဘက်ကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံတစ်ခုကို ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ပြီး ရင် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ဆို တဲ့ အဲ့ဒီ http://www.aung.info ပိုင်ရှင် အောင်ဆိုသူရဲ့ မဆင်မခြင် ရမ်းကားတဲ့ အပြောဟာ လုံးဝမမှန်ဘူးဆိုတာတော့သိပါတယ်။ အခု ဒီအပေါ်ကစာပိုဒ် ကိုဖတ်ကြည့်ရင် ဘယ်သူအမှန် ဘယ်သူအမှားလည်းဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အဖြေကလုံးဝရှင်းနေပါတယ်။ သူ photoshop လုပ်ထားတဲ့ ပုံမှာ Otto de Voogd ရဲ့ distinctive or recognizable part ကြီး ဖြစ်တဲ့ ဘတ်(စ်) ကားကြီး ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေတာ ဘယ်သူမှငြင်းမရပါဘူး။ ယခု ဒီ Information Sheet ကိုဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်မိတာက ကျွန်တော်သာ အဲ့ဒီ ဓါတ်ပုံ ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်မယ် ကျနော့ အလုပ်တွေကို လည်းခနပစ်ထားခဲ့လို့ရမယ်သာဆိုရင် ဒီလို လူလိမ် လူညာကို Australia အထိရေဆုံးရေခန်းလိုက်ပြီး ကောင်းကောင်းပညာပေးမိမှာ ပါပဲ။ Australia ဟာ rule of law ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဖာသာသူ ဘယ်လိုရှေ့နေပဲရှိရှိ ဘယ်လိုပဲတိုင်ပင်ထားတိုင်ပင်ထား ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ Australia မှာလည်း ငွေရဖို့ပဲချောင်းနေတဲ့ ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်မမြင်တဲ့ ခပ်ချာချာရှေ့နေတွေရှိနေမှာမလွဲပါ။ For example, လူသတ်တာကို လက်ပူးလက်ကြပ်နဲ့အမိခံထားရသူဟာ ဘယ်လောက်တော်တဲ့ရှေ့နေငှားငှား အပြစ်မလွတ်ပါဘူး။ ကျနော့ရဲ့ ယခု Info ကို Otto de Voogd သိအောင်လည်း ကို Michael အနေနဲ့ကူညီပေးစေလိုပါတယ်။ ဒီ Info sheet ကို သူ ကျနော့ဆီက တိုက်ရိုက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော့ email ကိုသူ့ဆီ forward လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ဆီ ပို့ပေးပါ့မယ်။ ဒီလူလိမ်ရဲ့ သရုပ်မှန်တွေကို လူအများသိစေချင်တဲ့ကျနော့အတွက် ဒီ incident လေး ဟာ တကယ့်ကို အားဆေး တစ်ခွက်ပါပဲ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုလူအများသိစေချင်သလဲကျွန်တော် comment နောက်တစ်ခုနဲ့ဆက်ရေးပါ့မယ်။
i strongly recommend for Ko tin suggestion
this is annoying..he is such an pessimist and some kinda fraud.
i felt ashamed for our burmese race.
ကျွန်တော် အဲ့ဒီ blog (www.aung.info) အကြောင်းပြောချင်နေတာ ကြာပါပြီ၊ အခုတော့ ရေငတ်တုံးရေတွင်းထဲကျဆိုသလိုပါပဲ။ နည်းနည်းတော့ရှည်ရှည်ရေးပါရစေ။ အပြတ်သားဆုံးနဲ့ အပွင့်လင်းဆုံး ပြောချလိုက်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် အဲ့ဒီ blog ပိုင်ရှင် Aung ဆိုသူကို လူလိမ်တစ်ဦး လို့ ပဲမြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လွန်ခဲ့ တဲ့ ၆လ ရလလောက် က စပြီးသူ့ blog ကို စတင်တွေ့ ရှိ ဖတ်မိပါတယ်။ စစဖတ်ချင်းတော့ ဟုတ်သလိုလိုပဲ။ နောက်ပိုင်း ကိုယ့် အတွေ့ အကြုံတွေ အရ ရိပ်မိလာတာက သူဟာ လူတွေကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပါးပါးနပ်နပ်လိမ်ညာတတ်သူ အဖြစ်တွေ့လာတာပါပဲ။ သူဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်ကို ထောက်ပြပြုပြင်သလိုလိုနဲ့ နှိပ်ကွပ်နေသူ၊ လိမ်ညာတာ မကောင်းပါဘူး တွင်တွင်ပြောနေပေမဲ့ လိမ်ညာနေသူ၊ အမျိုးသမီးများကို တန်ဖိုးထားသလိုလိုနဲ့ ပါးပါးနပ်နပ် online ကနေ မျှူစွယ်နေသူ ဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတော့တယ်။ ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် သူရေးထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ဗမာ တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ post မှာ အယုဒ္ဒယ သွားလည်တဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေရေးထားတာမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံဖူးတာနဲ့ မတူလို့ မတူကြောင်း ယဉ်ကျေးစွာ မစော်ကားပဲ comment ပေးခဲ့တာ သူ့ ရဲ့ reputation ကိုထိခိုက်တယ် ဆိုပြီး ဆင်ဆာဖြတ်ပါတော့တယ်။ reasonပေးတော့လည်း လုံးဝ strong မဖြစ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ post မှာ ထိုင်း tourist guides တွေက အယုဒ္ဒယမှာ ဗမာတွေ ဘယ်လိုယုတ်မာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့ကြောင်း ပြောရာ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေ စုတ်တသတ်သတ်ဖြစ်ကုန်ကြောင်း၊ ဗမာ ဆိုတာ ဘယ်လိုလူလည်း ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေ ရေရွတ်နေရာ သူက မိမိဗမာဖြစ်ကြောင်း ဆိုပြီး ရဲရဲ ဝံ့ဝ့ံ ရှေ့ ထွက်လိုက်ကြောင်း စသည်ဖြင့် exaggerate လုပ်ပြီးရေးထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က ကျနော့ အတွေ့ အကြံု အရ ထိုင်း တွင် ဘယ် tourist guide ကမှ အယုဒ္ဒယ မှာ ယခုလိုမပြောကြောင်း ဘယ် tourist ကမှ လည်း ထိုင်း ဗမာ စစ်ပွဲကို အဲ့ဒီလောက် စိတ်မဝင်စားကြောင်း၊ စာဖတ်သူများကိုယ်တိုင် အယုဒ္ဒယကိုသွားလည်ကြည့်လျှင်သိနိုင်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ရေးရာ ကျနော့ comment ကိုဖော်ကို မဖော်ပြတော့ပါဘူး။ အတော်ကိုသူရဲဘောကြောင်သူပါ။ သူပြောတာကတော့ သူ့ အရေးအသားတွေဟာ မှန်တယ်လို့လည်း ဝန်မခံသလို မှားတယ်လို့လည်း မပြောကြောင်းကို သူ့ blog policy မှာ ရေးထားပြီးသားလို့ဆိုပါတယ်။ လောကမှာ မှန်တာပြောရင်ပြော၊ မှန်တာမပြောရင် လိမ်တာ ဖြစ်တာကို မှန်တာလည်းမဟုတ် လိမ်တာလည်းမဟုတ်ဆိုပြီး ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ထားပါသေးတယ်။ ဆိုးတာက သူ့အကြောင်းကိုလူများရိပ်မိကုန်မဲ့ comment ဆိုရင် လုံးဝကို မဖော်ပြတာပါပဲ။
ရှိပါသေးတယ်.. post အောက်ကပေးထားတဲ့ comment တွေအောက်မှာ ယခင် သူ့ blog ပုံစံ အဟောင်းမှာ ကတည်းက ခပ်တည်တည်နဲ့ like/dislike ဆိုပြီး click လုပ်နိုင်အောင် ပေးထားရာ တချို့ သူ့ကို ပါးပါးနပ်နပ် ထောက်ထားတဲ့ comment များအောက်တွင် like များစွာအပေးခံထားရတာ သူ နှစ်မြို့ပုံ မပေါ်ပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက သူ့ရဲ့ ဟန်မကျတဲ့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက်တွေ အောက်မှာ dislike တွေများနေတာကို သူ အတော် အောင့်သက်သက်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ အဲ့ဒီ မှာ သူဟာ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို like/dislike များကို ဖြုတ်ခြင်း၊ သူ့ comment အောက်များမှ like/dislike များကိုသာ ဖြုတ်ခြင်း ပြန်တပ်ခြင်း စသည်ဖြင့် သူ့ဖာသူ အလုပ်ရှုပ်နေပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံး သူ့ ရဲ့ ယခု blog ပုံစံအသစ်မှာ ယခင်က like/dislike များ ဘယ်လောက်များများနည်းနည်း ပြန်မပါလာတော့ပါဘူး၊ ထားပါတော့ဒါကသူ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ။ ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက ဒီလူဟာ အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို psychiatric problem ပါးပါးလေးရှိပုံပေါ်ပါတယ်။
ယခုလည်း မကြာခင်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သတင်းပေးလို့ သွားဖတ်ကြည့်ရာမှာ ဗျူးတီးဖူးမြန်မာ ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သူမြန်မာပြည်ပြန်စဉ်က လေဆိပ်မှာ လာဘ်ပေးခဲ့လို့ အဆင်ပြေခဲ့တာတွေ အကြောင်းထည့်ရေးထားတာမှာ ရှေ့နောက်မညီတာတွေ တွေ့ရပါတယ် (ဥပမာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ဖြစ်နေပြီး လေဆိပ်ကနေ arrival ကို bus နဲ့ ပို့တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့)၊ ဒီအကြောင်းစာဖတ်သူ နောက်တစ်ဦး ကလည်း comment ပေးပြီး သူ့ ရဲ့ copy right နဲ့ပါက်သက်ပြီး မလုပ်သင့်တဲ့သဘော အရိပ်အမွက်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ကားတိုက်တာ ခွေးဟောင်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြဆိုကြသူတွေကို ခွေး နဲ့ မသိမသာနှိုင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ယခုတခါ သူဒီလို သူများဟာ ယူသုံးပြီး သူ့ ဟာ၊ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ shareတဲ့ဟာ ဆိုပြီး ပေါ်တင်လိမ် ဗျောင်ငြင်းတာကို blog တွေမှာ ဝေဖန်တာနဲ့ ပါက်သက်ပြီး ထိုပြောဆို ဝေဖန်သူများကို မလောက်လေးမလောက်စားများဟု စော်ကားခြင်း၊ လာမလုပ်နဲ့ ငါ့ရှေ့နေနဲ့ ပြောပြီးသား အဆင်မသင့်ရင် နင်တို့ ပိုက်ဆံ အတောင့်လိုက်ထွက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ သဘောမျိုးရေးထားတဲ့ post (http://www.aung.info/?p=2696) ထပ်တင်ထားတာတွေ့ရတာ အလွန်ပင်ရုပ်ဆိုးလှပါတယ်။ ဗမာတွေ မကောင်းကြောင်းပြောနေတဲ့လူမှာ သူမကောင်းကြောင်းပြောသူများထက်ပင် ဆိုးဝါးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပါက်သက်ပြီး Myanmar community ကော international community ကပါလက်သင့်မခံ ပဲ တစ်ခုခု လုပ်သင့် တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူ့လုပ်ရပ်ကို လူတကာသိအောင် ဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ဒီလိုလူလိမ် လူညာတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်မှန်တွေပေါ်ပေါက်လာတာ လူ့လောကကြီးအတွက် တကယ်ကို ကံကောင်းတာပါပဲ။
#Note: Converted to Unicode#
Seems like he keeps bragging that there is no Photo Copyright in AU. I wonder why he didn’t google for “Photo Copyright AU“.
#Updated funny facts#
(1) I shot this photo by myself or by my friend.
(2) I got this photo from my friend.
(3) I got this photo from online other sites. You have no proof that this photo is yours.
(4) Ok Ok, this photo is yours. So what? AU copyright Law doesn’t include photos.
Shein Myint Aung says:
I want to help as volunteer for your project. Can I know details?
I’ve added you to G+. We will discuss there. Thanks.
##Updated After I have read updated post about this##
ဒီမှာ ဒီပို့စ်အတွက် ရှာဖွေရရှိတဲ့ပုံတွေကို ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်လို့ Copyrighted သုံးသင့်တယ် ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။ သူသုံးတဲ့ပုံတွေမှာ ရေစာမပါလို့ 7is7 ရဲ့ ပုံဖြစ်ကြောင်း မသေချာလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ကြည့်ပါ။ 7is7.com ဆိုတဲ့ ရေစာကို Crop လုပ်ထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အပြည့်စုံဆုံး ပုံပိုင်ရှင်ဟာ မူရင်းပိုင်ရှင်ပါပဲ။ Common Sense နဲ့ စဉ်းစားရင် သိနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက CC License ပေးမထားရင် ပုံတွေဟာ အလိုအလျောက် Copyrighted Act နဲ့ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ derivative work ဆိုတာ အသာထား။ ပိုင်ရှင်သုံးခွင့်မပေးထားတဲ့ပုံကို (လုံးဝ) ကို သုံးခွင့် ပြင်ခွင့် မရှိပါဘူး။
LeaveaReply to Lionslayer